The Tender Bar – Gold Channel Movies
SD Direct StreamingUnknown resource
HD Direct StreamingUnknown resource
Between the ones who love you and the ones who leave you is the journey ofalifetime.Dec. 17, 2021USA104 Min.R
TheTender Bar (2021)
ကိုယ်တွေရဲ့အသည်းကျော်မင်းသားကြီး Ben Affleckရဲ့ပူပူနွေးနွေးကားသစ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
Amazon Primeကနေ Productionလုပ်လာတဲ့ ဒီ Tender Barဇာတ်ကားလေးကိုတော့ အဖေနဲ့ကွဲကွာနေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်
ဂျေအာလို့ခေါ်တဲ့ကလေးဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက အဖေကိုသေသေချာချာမမြင်ဖူးခဲ့ဘဲ အမေနဲ့အတူ အဘိုးဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ဆီပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူပါ အဘိုးရဲ့အိမ်မှာတော့ သူ့ဦးလေးဖြစ်သူ ချာလီလည်းအတူတူနေထိုင်ကြပါတယ်
အဖေနဲ့မရင်းနှီးခဲ့ရသူ အဖေ့အချစ်ကိုအပြည့်အဝမရခဲ့သူ ဂျေအာဟာ ဦးလေးဖြစ်သူအပေါ်မှာတော့ သံယောဇဉ်ကြီးခဲ့သူပါ ဦးလေးဖြစ်သူဟာလည်း ယောက်ျားပီသသူတစ်ဦးပီပီ တူဖြစ်သူဂျေအာ့အပေါ် သားအရင်းလိုပဲသဘောထားပြီး သွန်သင်ဆုံးမပေးတဲ့သူပါ
ဂျေအာကိုယ်တိုင်ကလည်း ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ပြောစကားတွေနဲ့အတူ အမေဖြစ်သူအပေါ်လိမ္မာရင်း တဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာပုံကို Documentaryဆန်ဆန် မိသားစုဇာတ်ကားလေးအဖြစ်ရိုက်ကူးပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဇာတ်ကားလေးထဲမှာတော့ ဂျေအာရဲ့ဦးလေးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Ben Affleckရဲ့ Charismaတွေကိုသေချာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ကလေးသရုပ်ဆောင် Daniel Raneiriရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်း သေချာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင် ဇာတ်ကားထဲက ဂျေအာ့အပေါ် ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ပြောစကား ဒိုင်ယာလော့တွေက ထိမိပြီး လက်တွေ့ဆန်တဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တာမလို့ တော်တော်ကြည့်ရအဆင်ပြေတဲ့ကားကောင်းလေးအဖြစ်နဲ့ပဲ ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်ဗျာ…
Translated by Zac, Mary Christ, Monn & C’mon
Reviewed by Zac
Original title The Tender Bar
IMDb Rating 6.3 431 votes
Young J. R. Moehringer
Download Mega HD 720p Myanmar 900 MB
Download G Drive HD 720p Myanmar 900 MB
Download Mega SD 480p Myanmar 500 MB
Download Yandex SD 480p Myanmar 500 MB
Download Mega FHD 1080p Myanmar 2.2 GB
Download G Drive SD 480p Myanmar 400 MB
Download G Drive FHD 1080p Myanmar 2.2 GB
Sci-Fi & Fantasy 104
© 2022 by Gold Channel Movies. All Rights Reserved. Powered by DooPlay